Showing 71-80 of 100 items.
नयाँ बर्षको विहानीमा धरान (फोटोफिचर)
धरान: आज नयाँ बर्ष २०७७ सालको पहिलो दिन अर्थात बैशाख १ गते । बितेका बर्षको समिक्षा गर्दै आउदा दिनको लागि अझ उर्जा, उत्साह थप समेट्नुपर्ने दिन । नेपाली नयाँ बर्षलाई हरेक बर्ष हामी ज्यादै उत्साहजनकरुपमा स्वागत गछौं । तर, यसपाली परिस्थिति विल्कुल अलग छ । हामी नेपालीहरु मात्र होइन, विश्व नै यतिबेला कोर ...
1,410 पटक पढिएको
न्यु इयर इभमा सुनसान बगरकोट (फोटोफिचर)
धरान: भोली नेपाली नयाँ बर्ष २०७७ सालको पहिला दिन अर्थात बैशाख १ गते । आज २०७६ सालको अन्तिम दिन अर्थात चैत ३० गते । बोलीचालीको भाषामा भन्नुपर्दा न्यु इयर इभ । समय सामान्य हुन्थ्यो भने आजको साँझ धरानको बगरकोट कति रमझम हुन्थ्यो, यहाँ शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्न । धरानको चर्चित पर्यटकीयस्थल हो,धरान १५ स् ...
प्रकाशित मितिः चैत्र ३०, २०७६
धरानमा राहत वितरणमा भिड, जनप्रनिनिधिको खै सावधानी ? (भिडियोसहित)
धरान: कोरोना भाइरस(कोभिड १९) को संक्रमणबाट बच्न एकअर्काबीचमा दुरी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । भिडभाडमा पनि जान हुदैन । त्यही भएर जोखिम रोकथामको लागि सरकारले लकडाउन गरिरहेको छ । धरानमा भने अगुवा भनिएका जनप्रतिनिधिहरुबाट नै जोखिम निम्त्याउने काम भइरहेको छ । धरानमा अतिविपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरिदा अव् ...
1,957 पटक पढिएको
धरानमा यसरी हुदैछ राहत प्याकिङ, पहिलो चरणमा ३ हजार परिवारलाई राहत वितरण गरिने (भिडियोसहित)
धरान: धरान उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणको राहत वितरण तयारी थालेको छ । राहत वितरणको लागि आजदेखि राहत प्याकिङ गर्न शुरु भएको छ । उपमहानगरपालिकाले धरान ८ स्थित सभागृहमा राहत सामग्री भण्डारण गरेको छ भने त्यही आजदेखि राहतको लागि प्याकिङ गर्न पनि थालेको हो । राहत समग्री प्याकिङ गर्न रेडक्रसकर्मीहरुले सहयोग ...
1,925 पटक पढिएको
सुनसान वीपी प्रतिष्ठान(फोटो र भिडियोसहित)
धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा दैनिक सयौं विरामीहरु ओपिडीमा जाँच गराउन आउथे । इर्मजेन्सीमा पनि थामिनसक्नु विरामीको चाप हुन्थ्यो । केही दिनयता वीपी प्रतिष्ठान परिसर सुनसान छ । दैनिक २५ सय हाराहारीमा ओपिडी पुर्जी काट्ने काउन्टर बन्द छ । इर्मजेन्सीमा केही संख्यामा विरामी र तिनक ...
प्रकाशित मितिः चैत्र १४, २०७६
धरान १४ विजयपुरस्थित बुढासुब्बा मन्दिर प्रसिद्ध धार्मिकस्थल हो । यो मन्दिरप्रति आम मानिसहरुको ठुलो आस्था छ । अरुबेला दिनहुँ दर्शन गर्न आउने श्रद्धालु भक्तजनहरुको भिड लाग्ने यो मन्दिर ३ दिन यता भने सुनसान छ । स्थानीय व्यवसायी लक्ष्मण श्रेष्ठका अनुसार बुढासुव्वामा दर्शन गर्न र पुजा गर्न दैनिक एक हजार ...
प्रकाशित मितिः चैत्र १३, २०७६
1,964 पटक पढिएको
लकडाउनमा साँझको धरान (फोटो फिचर)
धरान: मुलुक एक साताको लागि लकडाउनको अवस्थामा छ । त्यसैले धरानमा पनि स्वतः लकडाउन हुने नै भयो । अझ धरानमा त औषधी पसलबाहेक सबै बन्द गरिएको छ । र, पनि दिउँसो लकडाउन उल्लंघन गर्ने डेढ सयभन्दा बढी मानिसहरु प्रहरी नियन्त्रणमा दिनभर रहे । उनीहरुलाई साँझ पुनःलकडाउन उल्लंघन नगर्ने सर्तमा छोडियो । केहीलाई छो ...
1,823 पटक पढिएको
लकडाउनको दोस्रो दिन यस्तो देखियो धरान(फोटोफिचर)
धरान: लकडाउनको दोस्रो दिन आज बुधबार धरानमा प्रहरीले हिजोभन्दा कडाई गरेको छ । प्रहरीले पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएपछि पहिलो दिनजस्तो खुलेआम हिड्नेहरुको संख्या कमी छ । यद्यपी, अझै पनि लकडाउन उल्लंघन गर्नेहरु छन् । तिनीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर राखेको छ । अत्यावश्यक(अस्पताल जाने) काम, अत्यावश्यक ढ ...
अत्यावश्यकबाहेक धरानमा पनि सबै बन्द, इन्स्पेक्टरको कमाण्डमा र्यापिड रेस्पोन्स टिम परिचालन(फोटोफिचर)
धरान: कोरोना भाइरस(कोभिड १९) को संक्रमण फैलन नदिन धरानमा पनि अत्यावश्यकबाहेक सबै बजार, होटल, मनोरञ्जन, खेलस्थलहरु बन्द भएका छन् । आज बिहानदेखि एकबाट अर्को जिल्ला चल्ने सवारीसाधनहरु पनि बन्द भएका छन् । धरानको सिनेमा घर, सुनचाँदी पसल, घण्टाघरलगायत सबै बन्द भएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएस ...
2,132 पटक पढिएको
धरानको मट्का चियाः युवाहरुको जक्सन (फोटोफिचर)
धरान: चिया पसल जताततै खुलेका छन् । त्यसैले साथीभाई भेटियो कि चियाको अफर गरिन्छ । धरान १९, किरात चोकस्थित धनकुटे रोडको एउटा चिया पसल भने अन्यत्रको भन्दा फरक छ । यो चिया पसल हिजोआज धरानका टिनएजर्स माझ चर्चित बन्दै गइरहेको छ । युवाहरुको आकर्षणको केन्द्र बनेको यो चिया हो, मट्का चिया । यो चिया पसल युवाह ...
2,578 पटक पढिएको